လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 99W, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့် မိုးများလာမည့် မြန်မာပြည်
Leaveacomment ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ 06W, Andaman Sea, Bay Of Bengal, RUMBIA, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, တောင်တရုတ်ပင်လယ် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တို့ဖြင့် မိုးလေဝသအခြေအနေကို ခန့်မှန်း လေ့လာခြင်း
Leaveacomment နည်းပညာ, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးလေဝသအခြေအနေ, ရေပြင်ညီဖိအား, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ အားကောင်းလာမည့် မုန်တိုင်း GUCHOL(05W) နှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ 05W, GUCHOL, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုတ္တမကွေ့, မွန်တနင်္သာရီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်, လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်ခြေ ၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက် အမြင့်ပေအလိုက် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှု အခြေအနေ
ဧပြီလ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃၀ နာရီ အထိ အမြင့်ပေအလိုက် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှု အခြေအနေ
အမြင့်ပေ ၁၀၀၀ နှင့် အထက် အမြင့်ပေ ၄၇၀၀ နှင့် အထက် အမြင့်ပေ ၈၀၀၀ နှင့် အထက် အမြင့်ပေ ၁၁၀၀၀ နှင့် အထက် အမြင့်ပေ ၁၃၇၀၀ နှင့် အထက်
MMW Blog Mobile Link . . . → Read More: ၂၀၁၂-၀၄-၀၁ ရက် အမြင့်ပေအလိုက် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှု အခြေအနေ
Leaveacomment လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ winds Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum